Indlu eyi-Rustic eduze ne-National Park - I-Airbnb
Indlu eyi-Rustic eduze ne-National Park
Braojos, Comunidad de Madrid, i-Spain
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Pablo
U-Pablo Ungumbungazi ovelele
ISEphulelo UBUSUKU OBU-7 NOMA NGAPHEZULU 20%, INYANGA YONKE 47% !!!
Indlu ye-rustic, eyenziwe ngamatshe nezingodo. Kutholakala endaweni edolobheni elincane, i-Braojos, ukuphakama kwamamitha angu-1.200, e-Central Mountains of Spain. Indlu izungezwe izintaba namahlathi, imizuzu engama-50 ukusuka edolobheni laseMadrid
Yindlu ye-rustic esanda kulungiswa, ezimele, zonke izinkuni namatshe, endaweni encane yezintaba. Izindonga zayo zamatshe ezibanzi zikwenza kuphole ehlobo, ebusika konga kahle kakhulu ukushisa kokushisisa kanye nesitofu sezinkuni (umlilo uyabonakala).
Ungakwazi ukupaka endaweni yokungena efanayo futhi wehlise imithwalo ngokunethezeka. Emnyango kukhona i-patio enkulu, enephansi lamatshe, eqoqwe futhi libalele, enetafula, isambulela nezihlalo zakho.
Ngokusebenzisa i-patio ungangena phansi phansi kwe-haystack, ophahleni kanye nephansi lezinkuni, ikhabethe elinesibuko, amakhabethe kanye nesifuba sabadwebi bezinto zakho. Umbhede ophindwe kabili mkhulu, unomatilasi omuhle kakhulu namaduvethi emvelo okulala kahle. Kuyindawo ethule kakhulu, engenamsindo wangaphandle. Ngokuphambene nayo inendlu yokugezela encane eneshawa, nakho konke okudingayo (thawula, i-shampoo, njll.).
Ungakwazi ukufinyelela esitezi esiphezulu ngezitebhisi noma ngomunye umgwaqo ongena kuwo. Lesi sitezi siphinde sibe nephansi lamapulangwe kanye nosilingi kanye nezindonga ezibonwa ngamatshe. Inemigqa emibili yamafasitela kanye nama-skylights ukuze ukwazi ukujabulela ukubuka isibhakabhaka nokuma kwezwe ngaso sonke isikhathi. Inekhishi eline-ceramic hob, ifriji, umshini wokuwasha izitsha kanye nezitsha. Kunetafula elinezihlalo, umbhede osofa kanye nesitofu sezinkuni. Ubuye ube ne-balcony enkulu, efulelwe ngokhuni, ebheke eningizimu, futhi enetafula, izihlalo kanye nemibono emihle kakhulu. Ayikho i-TV.
4.93 · 250 okushiwo abanye
Umoya ohlanzekile, ukuthula. Ukupaka okulula. Idolobhana lizungezwe izimfunda namagquma anezihlahla ze-oki nezihlahla zomlotha; Namahlathi kaphayini anezihlahla ze-holly neze-yew. Unemizila eminingi yokuhamba, imizila yebhayisikili yezintaba, ukugibela amahhashi noma ukugibela izimbongolo. I-Paragliding, i-canoeing, ukugibela ... Futhi imidlalo yasebusika (ukushushuluza, ukuhamba ngeqhwa, ukushushuluza, njll.). Ehlobo kunezindawo zokugeza zemvelo ongazijabulela. Vakashela i-Guadarrama National Park, i-Rincon Biosphere Reserve namahlathi e-beech eseduze, i-birch ne-holm oak. Sitshele ukuthi yini ofuna ukuyenza futhi sizokuncoma okungcono kakhulu!
Ngitholakalela wena nsuku zonke, mathupha noma ngocingo
Kodwa ngixolele ngoba angikwazi ukukhuluma kahle isingisi
Hlola ezinye izinketho ezise- Braojos namaphethelo